Ka 14, 2018 admin
New York obodo atụmatụ blockchain center
Mara ọkwa Monday n'oge blockchain izu na New York, na New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) launching ọtụtụ atumatu na-etinye na obodo na map dị ka a blockchain technology ehiwe. Nke mbụ n'ime ha bụ a plan-emeghe a “Blockchain Center” ga ma kwalite oha nke technology na ikwado mkparịta ụka n'etiti ụlọ ọrụ nketa oke.
The NYCEDC-mara ọkwa a mpi, anya ẹkedori ke mbubreyo 2018, bu n'obi n'ịwa echiche maka rụọ ọchịchị ọrụ na blockchain tech.
Samourai na goTenna igba egbe Bitcoin wallet na-arụ ọrụ na-enweghị internet
Ebe ọ bụ na internet njikọ na-bụghị mgbe niile dị, pụrụ ịdabere ma ọ bụ onwe, cryptocurrency ọrụ dị mkpa ọzọ ụzọ jikọọ na netwọk. Ya mere, ndị New York dabeere mmalite goTenna, hiwere na 2012 site Brazil ụmụnne Daniela na Jorge Perdomo, na-partnering na Samourai obere akpa ẹkedori ihe gam akporo ngwa nke a n'oge okpomọkụ na-enye ohere ka ndị ọrụ na-eziga bitcoin ịkwụ ụgwọ na-enweghị njikọ Ịntanetị.
“Ị mkpa na-enwe ike-eji oge gị bitcoin ọbụna ọdachi ebe,” goTenna engineer Richard Meyers kwuru, hotasịrị ihe Perdomo ụmụnne’ adịbeghị anya na-arụ ọrụ na Puerto Rico, ebe goTenna ngwaọrụ nyeere ndị mmadụ reconnect mgbe Hurricane Maria. “Dị ka ogologo dị ka i nwere a ụzọ na-ana ekwentị gị, ị pụrụ elu na meshed na-ekwurịta okwu.”
“Ọ na-enye onye ọzọ na ihe ndị ọzọ nnyocha na-eguzogide,” Meyers kwuru.
Florida ọnaụtụ bụ nke mbụ US Gov gị n'ụlọnga na-anabata Bitcoin
A Florida asị ọnaụtụ ka partnered na Bitcoin ego processor BitPay ịnabata cryptocurrency maka a dịgasị iche iche nke ọrụ.
Seminole County Tax mkpoko Joel Greenberg kwuru na nkwupụta Monday na ya ọrụ ga-Bitcoin maka ịkwụ ụgwọ jikọtara ọkwọ ụgbọala ikikere na ID kaadị, ụgbọala tags na utu aha na onwunwe tax.
Greenberg kwuru na nkwupụta:
“Ebumnuche nke m tenure na ụlọ ọrụ bụ ime ka anyị ahịa ahụmahụ ngwa ngwa, echeta na ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma, na ime ka ọchịchị ọrụ si narị afọ nke 18 n'ime narị afọ nke 21 na otu ụzọ bụ na mgbakwunye na nke cryptocurrency anyị ugwo nhọrọ… na Seminole County Tax mkpoko si ọrụ, anyị aku anyị mbụ gọọmenti na-anabata Bitcoin… site na-eme ka ọ dị mfe na enweghị nkebi ha,” o kwukwara.
NASDAQ-kwadoro cryptocurrency mgbanwe ẹkedori na June
dx.exchange, nke a na-emekwa ka malite n'ọnwa ọzọ, na-mbụ kaadị mgbanwe kwadoro site NASDAQ. "Ihe nke a imekọ ihe ọnụ bụ atọ: ika aha, nkà na ụzụ na ụkpụrụ,"Kwuru DX Exchange CEO Daniel Skowronski.
Mgbe mbụ uru bụ nnọọ onwe-nkọwa, Skowronski kwukwara na ha technology ga-adabere na NASDAQ si akụrụngwa, dị ka ya kenha engine - eji n'elu 70 mgbanwe gburugburu ụwa.
SAP ẹkedori blockchain ọkọnọ oru ngo
Si ọtụtụ mba software ike SAP na-ịgbasa ya ọrụ na blockchain n'ime ọkọnọ yinye ohere.
SAP na-achọ itinye tech ugbo ọkọnọ ígwè site n'ụzọ nke ya Farm na Consumer igba.
Torsten acce, SAP si blockchain edu ndú kwuru “The enwekwukwa technology na-enye ohere ụlọ ọrụ Chọpụta mmalite nke nri na ngwaahịa, tinye na arịrịọ na àjà, na nyochaa na e kpere azụmahịa.”
All Cryptocurrencies ...
Kasị ibu n'ụwa diam ...
Previous Post:kaadị-eto Eto